ဘာလို့ FIGHTING GAMES တွေ လူဆော့နည်းတာလဲ? – Gaming Noodle
Fighting Games ဆိုတာနဲ့ လူတိုင်း Street Fighter, Tekken နဲ့ Mortal Kombat ကိုပြေးမြင်ကြမှာပါ။ ပြီးရင် ကြိုက်လားမေးရင်လဲ ၁၀၀ မှာ အယောက် ၉၀ လောက်က ကြိုက်တယ်ပဲ ဖြေကြမှာအသေအချာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆော့ဖြစ်ကြလားဆို အများစုက ဟင့်အင်းပဲဖြေကြမှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Dota2, League of Legends လို MOBA ဂိမ်းတွေ CSGO နဲ့ PUBG လို Shooter Games တွေ ဦးဆောင်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ Fighting Game တွေဟာ အရမ်း Niche ကသိကအောက်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးအစားထဲမှာ ပါနေပါတယ်။ ကြိုက်ရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့မဆော့ကြလဲဆိုတာ အရမ်းထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ အဲ့အတွက် ၂၀၁၈ ထဲမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဂိမ်မာတွေကို analysis survey စစ်ဆေးမှုတစ်ခု လုပ်ခဲ့တာမှာ တိကျတဲ့အဖြေတစ်ခု ထွက်လာပါတယ်။ အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ ခက်လို့ မဆော့တာပါတဲ့။
Fighting Game တွေကို ဘာလို့လူကြိုက်ကြသလဲ?
Anime fan တွေထဲ Rock Lee နဲ့ Gaara ချတာကိုမကြိုက်ဘူး ထအော်ရင် အဲဒီ့လူကို ဝိုင်းထိုးကြမှာသေချာပါတယ်။ ခုတောင် Marvel ရဲ့ Endgame ကိုမကြိုက်ဘူးပြောမိရင် ချောင်းရိုက်မယ့်လူအုပ်ကြီး သေချာပေါက်ရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲ? လူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချကြတာကိုကြည့်ရတာ ကြိုက်ပါတယ်။ Shonen Anime တွေရဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေ အချင်းချင်းချကြတဲ့ Tournament arc ဟာ လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ story arc တစ်ခုပါ။ Fighting Game တွေဟာ တစ်နည်းအားဖြင့် အဲဒါတွေကို ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ခံစားနိုင်အောင်လုပ်ထားတဲ့ ဂိမ်းတွေပါ။ ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ ဒီကိစ္စက အထူးတလည်ရှင်းပြစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
ဒါဆိုရင် Fighting Game တွေကို ဘာလို့လူမဆော့ကြသလဲ?
-သူများတွေချနေတာ ကြည့်ရတာကြိုက်ပေမယ့် မင်းဝင်ချမလားဆိုဘယ်သူမှမချချင်ပါဘူး။ ဒါက အရိုးရှင်းဆုံး အဖြေပါ။ Game တစ်ခုရဲ့ ရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မတူပါဘူး။ ဘာလို့ လူမဆော့ကြသလဲဆိုလို့ ဘယ်သူမှမဆော့ဘူးလို့လဲ မထင်ပါနဲ့။ ဆော့လွန်းလို့ Fighting Game Community (FGC) ဆိုပြီး သတ်သတ်မှတ်မှတ် ခေါ်ရလောက်တဲ့ထိရှိသလို တစ်နှစ်တစ်ခါကျင်းပတဲ့ World EVO tournament ဆိုတာ ESPN ကတောင် ထုတ်လွင့်ရတဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါ။
Fighting Game တစ်ခုကို သေချာထဲထဲဝင်ဝင်ဆော့ဖို့ဆိုတာ အရမ်းခက်ပါတယ်။ High, Low, Overhead, Neutral, Frame advantage/data/trap, Guardstun, Recovery, Ukeme, Zoning စသဖြင့် အခေါ်အဝေါ်တွေလည်း တစ်ပုံကြီးရှိပါတယ်။ ဒါတွေအကုန်လုံးကို နောက် Post တစ်ခုမှာ သေချာရှင်းပြပေးပါ့မယ်။
ဥပမာ (၁) ပုံမှန်ခုမှစဆော့တဲ့ player တစ်ယောက်ဟာ ဒါတွေကိုနားမလည်တဲ့အတွက် ခလုတ်တွေ လျှောက်နှိပ်ပါတယ်။ အဲမှာလူနဲ့မချခင် Arcade Mode ရဲ့နောက်ပိုင်း stage တွေမှာတင် စမှောက်မှာအသေအချာပါပဲ။ ၅ ပွဲလောက် ခံရပြီးရင် လူက တော်တော်တင်းနေပါပြီ။ Dark Souls တို့ဘာတို့မတိုင်ခင် Salty ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ Controller ကြီး ကိုင်ပေါက်တယ် ဘာညာဆိုတာ Street Fighter ရဲ့ Akuma နဲ့ Gill ကနေ စခဲ့တာမေ့လို့မရပါဘူး။ ဒါတောင် လူလူချင်းချတာ မဟုတ်သေးဘူးနော်။
ဥပမာ (၂) လူလူချင်း စချပါပြီတဲ့။ ဘေးချင်းကပ်ရက်ဘော်ဒါနဲ့ ဆော့တယ်ပဲဆိုပါစို့။ ကိုယ်က ၅ ပွဲလောက် ဆက်တိုက်နိုင်လိုက်ပြီဆိုရင် သူဆက်ဆော့ချင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သိပ်လိုက်တဲ့ ကိုယ်ကတော့ ကြောက်တာလား ဘာလားဆိုပြီး ဆက်ဆော့ချင်နေပါလိမ့်မယ်။ ပြောင်းပြန် ပြန်တွေးကြည့်ပါ။ ကိုယ်လဲရှုံးရင် ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်သူမှ တောက်လျှောက်ရှူံးရတာကို မကြိုက်ပါဘူး။
ဥပမာ (၃) Online စဆော့ပြီဆိုရင် စစချင်း New Player ချင်းပဲ တွေ့မှာပါ။ အဲမှာ ကိုယ်ကနိုင်နေပြီဆို computer AI ကမှ ခက်သေးတယ်ကွာဆိုပြီး ဆက်ဆော့ပါလိမ့်မယ်။ အဲမှာစတွေ့ပါပြီ ကိုယ့်ထက်ကြမ်းတဲ့ကောင်တွေ။ ဘယ်လိုဆော့ဆော့ကို မနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေ၊ ကပ်သီးလေးတစ်ချက်ထိုးခံရပြီး ရှူံးတာတွေ၊ အဝေးပစ် Spam တာကို ဘယ်လိုပြန်ချေပရမှန်း မသိလို့ Spam ခံရပြီးရှူံးတာတွေ။ ဟိုကောင်ချတော့ထိတယ် ငါချတော့မထိဘူး -ီးတောင်မဆော့ဘူးကွာ ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာပါပြီ။
ပြောချင်တာကတော့ Fighting Game တစ်ခုရဲ့ Skill Gap ဟာ Dota2, Csgo တို့လို Team-based Game တွေနဲ့ယှဉ်ရင် ပိုသိသာပါတယ်။ ရပ်ကွက်ကောင်းလို့ Rank တက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေ မရပါဘူး။ ရှူံးလဲ ဘယ်သူမှ blame လို့ အပြစ်တင်လို့ မရပါဘူး။ ကိုယ်ရှူံးရင်ရှုံးတာပါပဲ။ ဒီဒဏ်ထိသွားပြီဆိုတဲ့လူဟာ နောက် အနည်းဆုံးလေးငါးလလောက်ထိ Fighting Game ဆိုတာကြီးကို ပြန်မထိတော့ပါဘူး။ ကိုယ်တီးနေရရင်တော့ အရမ်းပျော်တယ်မလား။ ဒါဟာ Fighting Game ပါပဲ :3
Fighting Game ကြိုက်တဲ့လူကရော ဘာကြောင့်အရမ်းကြိုက်ပြီး ပုံမှန်ဆော့ကြသလဲ?
ပထမဆုံးကတော့ အထင်လွဲကြတာပါ။ ဂိမ်းခွေအသစ်ထွက်ချိန်လောက်ကလွဲလို့ ဘယ်သူမှ Fighting Game တစ်ခုကို တစ်နေကုန်ထိုင်ဆော့မနေပါဘူး။ အဲဒါမို့ Steam Chart လိုနေရာမျိုးမှာကြည့်လိုက်ရင် အများဆုံး Player Count က ထောင်ဂဏန်းပါ။ အဲဒါကိုဆော့တဲ့လူမရှိဘူးထင်ရင် မှားပါလိမ့်မယ်။ ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ဖို့ လူဆယ်ယောက် တစ်ရာ ပြည့်စရာမလိုတဲ့အတွက် လေးယောက်လောက်ရှိနေရင်ကို ပတ်လည်ဆော့နေလို့ရတဲ့ အမျိုးအစားပါ။ ပြီးရင် လူဆော့အများဆုံး Prime Time ဆိုပြီးရှိတဲ့အပြင် Discord Chat ကနေ ချိန်းပွဲတွေလဲရှိပါတယ်။ အရမ်းထူးဆန်းပါတယ် Discord admin middle man နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ ပိုက်ဆံကြေး Tournament တွေကအစ အပတ်တိုင်းမဟုတ်တောင် လတိုင်းရှိပါတယ်။ ဘယ်ဂိမ်း community မှ Casual တွေအတွက်အဲလောက် active မဖြစ်ပေးပါဘူး။ သေချာတာကတော့ Fighting Game တစ်ခုစဆော့မယ်ရည်ရွယ်ရင် သူ့ discord channel ကို google ခေါက်ပြီး join ဖြစ်အောင် join ပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ရှုံးရင်​ဘယ်​သူမှ Blame လို့မရ
ပျင်းတယ်​​ဆေးထိုးမယ်​ကွာဆိုပြီး ဝင်​​ဆော့လို့ရတဲ့ဂိမ်းမျိုးမဟုတ်​ ကိုယ်​ပဲ​​မှောက်​ပြီး ကိုယ့်​ဒုက္ခကိုယ်​ရှာသလိုဖြစ်​မယ်​
တစ်​ပွဲတစ်​ပွဲ အလွန်​ဆုံး ၅မိနစ်​ပဲ အလုပ်​ပျက်​အကိုင်​ပျက်​​တွေမဖြစ်​ အဲအချိန်​​လေးအတွင်းမှာပဲ စိတ်​​ကျေနပ်​မှု အပြည့်​ရ
မနိုင်​ဘူးဆို နှစ်​မျိုးပဲရှိတယ်​ ကိုယ်​ပိန်းလို့ရယ်​၊ ဟိုဘက်​ကပို​ကို​ကောင်း​နေလို့
Git Gud (အရှိကိုအရှိအတိုင်းလက်​ခံ မနိုင်ရင်ထက်ကြိုးစား)
ဘယ်​သူမဆိုထ​ဆော့နိုင်​ ဒါ​ပေမယ့်​ button mash ​လျှောက်​နှိပ်​​နေရင်​​တော့ တစ်​သက်​လုံးမနိုင်​
ဇာတ်လမ်း​တွေထဲက မင်းသား​တွေလို I won’t give up ဘာညာ၊ comeback ဖီလင်က ဒီလိုဂိမ်း​တွေမှာအပြည့်​ရ
ဒါတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လူတွေကတော့ Fighting Game ဆိုတာကြီးကိုချစ်ကြမှာအမှန်ပါပဲ။
(နောက် post မှာ in-game mechanics အသေးစိတ်နဲ့ ခုခေတ် hot နေတဲ့ fighting game တွေအကြောင်း ထဲထဲဝင်ဝင်ရှင်းပြပါ့မယ်)
Blazblue Cross Tag Battle (BBTAG)
#ArticlebyLan #Lan #FightingGame #StreetFighter #Tekken #DragonBall #MortalKombat #BBTAG
Unicode User မြားအတှကျ
ဘာလို့ FIGHTING GAMES တှေ လူဆော့နညျးတာလဲ?
Fighting Games ဆိုတာနဲ့ လူတိုငျး Street Fighter, Tekken နဲ့Mortal Kombat ကိုပွေးမွငျကွမှာပါ။ ပွီးရငျ ကွိုကျလားမေးရငျလဲ ၁၀၀ မှာ အယောကျ ၉၀ လောကျက ကွိုကျတယျပဲ ဖွကွေမှာအသအေခြာပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ဆော့ဖွဈကွလားဆို အမြားစုက ဟငျ့အငျးပဲဖွကွေမှာပါ။ ဟုတျပါတယျ၊ Dota2, League of Legends လို MOBA ဂိမျးတှေ CSGO နဲ့ PUBG လို Shooter Games တှေ ဦးဆောငျနတေဲ့ ခတျေကွီးထဲမှာ Fighting Game တှဟော အရမျး Niche ကသိကအောကျဖွဈတဲ့ အမြိုးအစားထဲမှာ ပါနပေါတယျ။ ကွိုကျရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့မဆော့ကွလဲဆိုတာ အရမျးထူးဆနျးတဲ့ ကိစ်စတဈခုပါ။ အဲ့အတှကျ ၂၀၁၈ ထဲမှာ တဈကမ်ဘာလုံးက ဂိမျမာတှကေို analysis survey စဈဆေးမှုတဈခု လုပျခဲ့တာမှာ တိကတြဲ့အဖွတေဈခု ထှကျလာပါတယျ။ အရမျးရိုးရှငျးပါတယျ။ ခကျလို့ မဆော့တာပါတဲ့။
Fighting Game တှကေို ဘာလို့လူကွိုကျကွသလဲ?
Anime fan တှထေဲ Rock Lee နဲ့ Gaara ခတြာကိုမကွိုကျဘူး ထအျောရငျ အဲဒီ့လူကို ဝိုငျးထိုးကွမှာသခြောပါတယျ။ ခုတောငျ Marvel ရဲ့ Endgame ကိုမကွိုကျဘူးပွောမိရငျ ခြောငျးရိုကျမယျ့လူအုပျကွီး သခြောပေါကျရှိပါတယျ။ ဘာလို့လဲ? လူတှဟော တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ခကြွတာကိုကွညျ့ရတာ ကွိုကျပါတယျ။ Shonen Anime တှရေဲ့ဇာတျကောငျတှေ အခငျြးခငျြးခကြွတဲ့ Tournament arc ဟာ လူတိုငျးကွိုကျတဲ့ story arc တဈခုပါ။ Fighting Game တှဟော တဈနညျးအားဖွငျ့ အဲဒါတှကေို ကိုယျတိုငျဝငျရောကျခံစားနိုငျအောငျလုပျထားတဲ့ ဂိမျးတှပေါ။ ဒါ့ကွောငျ့မို့လို့ ဒီကိစ်စက အထူးတလညျရှငျးပွစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
ဒါဆိုရငျ Fighting Game တှကေို ဘာလို့လူမဆော့ကွသလဲ?
-သူမြားတှခေနြတော ကွညျ့ရတာကွိုကျပမေယျ့ မငျးဝငျခမြလားဆိုဘယျသူမှမခခြငျြပါဘူး။ ဒါက အရိုးရှငျးဆုံး အဖွပေါ။ Game တဈခုရဲ့ ရှုထောငျ့က ကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ မတူပါဘူး။ ဘာလို့ လူမဆော့ကွသလဲဆိုလို့ ဘယျသူမှမဆော့ဘူးလို့လဲ မထငျပါနဲ့။ ဆော့လှနျးလို့ Fighting Game Community (FGC) ဆိုပွီး သတျသတျမှတျမှတျ ချေါရလောကျတဲ့ထိရှိသလို တဈနှဈတဈခါကငျြးပတဲ့ World EVO tournament ဆိုတာ ESPN ကတောငျ ထုတျလှငျ့ရတဲ့ ပွိုငျပှဲတဈခုပါ။
Fighting Game တဈခုကို သခြောထဲထဲဝငျဝငျဆော့ဖို့ဆိုတာ အရမျးခကျပါတယျ။ High, Low, Overhead, Neutral, Frame advantage/data/trap, Guardstun, Recovery, Ukeme, Zoning စသဖွငျ့ အချေါအဝျေါတှလေညျး တဈပုံကွီးရှိပါတယျ။ ဒါတှအေကုနျလုံးကို နောကျ Post တဈခုမှာ သခြောရှငျးပွပေးပါ့မယျ။
ဥပမာ (၁) ပုံမှနျခုမှစဆော့တဲ့ player တဈယောကျဟာ ဒါတှကေိုနားမလညျတဲ့အတှကျ ခလုတျတှေ လြှောကျနှိပျပါတယျ။ အဲမှာလူနဲ့မခခြငျ Arcade Mode ရဲ့နောကျပိုငျး stage တှမှောတငျ စမှောကျမှာအသအေခြာပါပဲ။ ၅ ပှဲလောကျ ခံရပွီးရငျ လူက တျောတျောတငျးနပေါပွီ။ Dark Souls တို့ဘာတို့မတိုငျခငျ Salty ဖွဈတယျဆိုတဲ့စကားနဲ့ Controller ကွီး ကိုငျပေါကျတယျ ဘာညာဆိုတာ Street Fighter ရဲ့ Akuma နဲ့ Gill ကနေ စခဲ့တာမလေို့မရပါဘူး။ ဒါတောငျ လူလူခငျြးခတြာ မဟုတျသေးဘူးနျော။
ဥပမာ (၂) လူလူခငျြး စခပြါပွီတဲ့။ ဘေးခငျြးကပျရကျဘျောဒါနဲ့ ဆော့တယျပဲဆိုပါစို့။ ကိုယျက ၅ ပှဲလောကျ ဆကျတိုကျနိုငျလိုကျပွီဆိုရငျ သူဆကျဆော့ခငျြမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သိပျလိုကျတဲ့ ကိုယျကတော့ ကွောကျတာလား ဘာလားဆိုပွီး ဆကျဆော့ခငျြနပေါလိမျ့မယျ။ ပွောငျးပွနျ ပွနျတှေးကွညျ့ပါ။ ကိုယျလဲရှုံးရငျ ထိုနညျးလညျးကောငျးပဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဘယျသူမှ တောကျလြှောကျရှူံးရတာကို မကွိုကျပါဘူး။
ဥပမာ (၃) Online စဆော့ပွီဆိုရငျ စစခငျြး New Player ခငျြးပဲ တှမှေ့ာပါ။ အဲမှာ ကိုယျကနိုငျနပွေီဆို computer AI ကမှ ခကျသေးတယျကှာဆိုပွီး ဆကျဆော့ပါလိမျ့မယျ။ အဲမှာစတှပေ့ါပွီ ကိုယျ့ထကျကွမျးတဲ့ကောငျတှေ။ ဘယျလိုဆော့ဆော့ကို မနိုငျဘူးဆိုတာမြိုးတှေ၊ ကပျသီးလေးတဈခကျြထိုးခံရပွီး ရှူံးတာတှေ၊ အဝေးပဈ Spam တာကို ဘယျလိုပွနျခပြေရမှနျး မသိလို့ Spam ခံရပွီးရှူံးတာတှေ။ ဟိုကောငျခတြော့ထိတယျ ငါခတြော့မထိဘူး -ီးတောငျမဆော့ဘူးကှာ ဆိုတာမြိုးတှေ ဖွဈလာပါပွီ။
ပွောခငျြတာကတော့ Fighting Game တဈခုရဲ့ Skill Gap ဟာ Dota2, Csgo တို့လို Team-based Game တှနေဲ့ယှဉျရငျ ပိုသိသာပါတယျ။ ရပျကှကျကောငျးလို့ Rank တကျတယျဆိုတာမြိုးတှေ မရပါဘူး။ ရှူံးလဲ ဘယျသူမှ blame လို့ အပွဈတငျလို့ မရပါဘူး။ ကိုယျရှူံးရငျရှုံးတာပါပဲ။ ဒီဒဏျထိသှားပွီဆိုတဲ့လူဟာ နောကျ အနညျးဆုံးလေးငါးလလောကျထိ Fighting Game ဆိုတာကွီးကို ပွနျမထိတော့ပါဘူး။ ကိုယျတီးနရေရငျတော့ အရမျးပြျောတယျမလား။ ဒါဟာ Fighting Game ပါပဲ :3
Fighting Game ကွိုကျတဲ့လူကရော ဘာကွောငျ့အရမျးကွိုကျပွီး ပုံမှနျဆော့ကွသလဲ?
ပထမဆုံးကတော့ အထငျလှဲကွတာပါ။ ဂိမျးခှအေသဈထှကျခြိနျလောကျကလှဲလို့ ဘယျသူမှ Fighting Game တဈခုကို တဈနကေုနျထိုငျဆော့မနပေါဘူး။ အဲဒါမို့ Steam Chart လိုနရောမြိုးမှာကွညျ့လိုကျရငျ အမြားဆုံး Player Count က ထောငျဂဏနျးပါ။ အဲဒါကိုဆော့တဲ့လူမရှိဘူးထငျရငျ မှားပါလိမျ့မယျ။ ပှဲတဈပှဲဖွဈဖို့ လူဆယျယောကျ တဈရာ ပွညျ့စရာမလိုတဲ့အတှကျ လေးယောကျလောကျရှိနရေငျကို ပတျလညျဆော့နလေို့ရတဲ့ အမြိုးအစားပါ။ ပွီးရငျ လူဆော့အမြားဆုံး Prime Time ဆိုပွီးရှိတဲ့အပွငျ Discord Chat ကနေ ခြိနျးပှဲတှလေဲရှိပါတယျ။ အရမျးထူးဆနျးပါတယျ Discord admin middle man နဲ့ပေါငျးပွီးလုပျတဲ့ ပိုကျဆံကွေး Tournament တှကေအစ အပတျတိုငျးမဟုတျတောငျ လတိုငျးရှိပါတယျ။ ဘယျဂိမျး community မှ Casual တှအေတှကျအဲလောကျ active မဖွဈပေးပါဘူး။ သခြောတာကတော့ Fighting Game တဈခုစဆော့မယျရညျရှယျရငျ သူ့ discord channel ကို google ခေါကျပွီး join ဖွဈအောငျ join ပါလို့ အကွံပေးခငျြပါတယျ။
ရှုံးရငျဘယျသူမှ Blame လို့မရ
တဈပှဲတဈပှဲ အလှနျဆုံး ၅မိနဈပဲ အလုပျပကျြအကိုငျပကျြတှမေဖွဈ
အဲအခြိနျလေးအတှငျးမှာပဲ စိတျကနြေပျမှု အပွညျ့ရမနိုငျဘူးဆို နှဈမြိုးပဲရှိတယျ ကိုယျပိနျးလို့ရယျ၊ ဟိုဘကျကပိုကိုကောငျးနလေို့
Git Gud (အရှိကိုအရှိအတိုငျးလကျခံ မနိုငျရငျထကျကွိုးစား)
ဘယျသူမဆိုထဆော့နိုငျ ဒါပမေယျ့ button mash လြှောကျနှိပျနရေငျတော့ တဈသကျလုံးမနိုငျ
ဇာတျလမျးတှထေဲက မငျးသားတှလေို I won’t give up ဘာညာ၊ comeback ဖီလငျက ဒီလိုဂိမျးတှမှောအပွညျ့ရ
ဒါတှကေိုကွိုကျနှဈသကျတဲ့ လူတှကေတော့ Fighting Game ဆိုတာကွီးကိုခဈြကွမှာအမှနျပါပဲ။
(နောကျ post မှာ in-game mechanics အသေးစိတျနဲ့ ခုခတျေ hot နတေဲ့ fighting game တှအေကွောငျး ထဲထဲဝငျဝငျရှငျးပွပါ့မယျ)